AMABALI AMATHATHU AQHELEKILEYO AQHUTYWA NGUDADE OVELA KWINTSOMI YEARTHURIAN - IINTSOMI ZE-ARTHURIAN
Zenziwa Njani Iirom
Spider Man Kwivesi Yesigcawu
Amabali amaThathu aQhelekileyo aQhutywa nguDade ovela kwiNtsomi yeArthurian
Uthotho olutsha lweNetflix lweArthurian Uqalekisiwe ibe ngumlindo onomdla, njengomntu owaziyo ngokwaneleyo ngeentsomi ezibanzi. Iintsomi zikaKing Arthur zihlala zitshintsha ngokuxhomekeka kumbhali, ke kuhlala kusoloko kukho iindlela ezahlukeneyo zokuthabatha. Uqalekisiwe ijolise kwiNimue, enye yeLadies yeLake ebonakalayo kweli bali.
Inguqulelo yakhe yahluke kakhulu kunangaphambili kwaye ngaphandle kokungena kubaphangi, kukho… ukhetho yenziwe, kodwa yilento iyiyo. Okwangoku, umboniso wandenza ndakhumbula ukuba kutheni bendisoloko nditsaleleka kubalinganiswa ababhinqileyo kumabali kaKing Arthur: Bonke babenemikhwa emibi ngokokuziphatha.
kwenzeke ntoni kulanie kwinqaba
Ukusuka kuGuinevere noMorgan le Fay ukuya eLynette naseLyonesse, abafazi base-Arthurian bayakhohlisa, banobundlobongela, banobuqhetseba, banesidima, kwaye bayothusa-bavulelekile ukuba baphononongwe ngokunzulu ngumbhali, kodwa ngokulula babekwa kwiibhokisi ezibonisa ukuba akukho nkathalo. ithathiwe. Nazi izinto ezintathu endizithandayo:
Ndandiqala ukuva ngaye ngengoma ye-Emilie Autumn, kodwa eyona nto ibalisayo yile yakhe Ukufa kuka-Arthur . U-Elaine uyintombi yesidima ebamba umnyhadala wokuqhula. Apho, utshixa amehlo kweyona knight yesini kubo bonke, iLancelot. U-Elaine umcela ukuba athwale umqondiso wakhe, kodwa uLancelot okwangoku uzinze kakhulu kukuthandana noKumkanikazi uGuinevere. Ke, kufuneka azifihle ukuze intombi yakhe etshatileyo ingakhubeki kakhulu.
Ngexesha letonamenti, uLancelot wenzakele, kwaye u-Elaine uzama ukutsala umongikazi oqhelekileyo ukuba abuyele empilweni ade andithande. Lancelot parries. Uphuke intliziyo, u-Elaine utsala iPadmé kwaye uyafa, kodwa ucela ukuba umzimba wakhe ubekwe kwisikhephe kwaye udadele ezantsi komlambo uye eCamelot. Ufunyanwa nguKumkani Arthur noLancelot, oziva elusizi ngokusweleka kwakhe kwaye ahlawule umngcwabo wakhe.
Ewe, kubuhlungu, kodwa ndiyayithanda.
INimue / iViviane;
Zininzi iinguqulelo ezahlukeneyo zeNimue, kodwa eyona ndiyaziyo yile: Phambi kokuba uNimue abe liNenekazi leLake, ungumfazi uMerlin othatheka kakhulu, nangona emxelela ukuba hayi, amaxesha amaninzi . Ekugqibeleni, uNimue uthatha isigqibo sokuba ukuba uza kuhlala emhlukumeza, uya kufumana into kuyo: umlingo.
UNimue uxelela uMerlin ukuba akafumani thando ade amfundise konke akwaziyo. UMerlin, oxakekile ukuba ngumntu omdala, unje, upholile, upholile, upholile. Ke, umfundisa umlingo, kwaye xa sele esazi ngokwaneleyo, uNimue ucebisa uMerlin ukuba ambambise ukuze angaphinde amkhathaze. Amaxesha amaninzi, ubambekile emthini, kodwa ngamanye amaxesha, njengakwi Ukufa kuka-Arthur , kuphantsi kwelitye-nokuba yeyiphi na indlela, ukuxhatshazwa kwaphela.
inkosi yamakhonkco imifanekiso
Ke, kuncwadi oluphakathi, kwakukho le trope ibizwa ngokuba yiLoathly lady. Ngokusisiseko, la ngamabali ngamadoda athandana nabafazi abangathandekiyo, kodwa emva koko baqonde ukuba bangama-assholes kwaye abaphantsi - kuphela ukuze kubonakale ukuba ukungathandeki sisiqalekiso, kwaye uthando lwenene luyasophula. Enye yeenguqulelo ezidumileyo kule nto ikuMfazi kaBath's Tale ovela kuGeoffrey Chaucer Iimbali zeCanterbury . Nangona kunjalo, yenzeka ngexesha lika-King Arthur, ke ibalulekile.
Nantsi into malunga nenkundla kaKing Arthur: Iinqwelomoya zemilingo zazisoloko zibonisa kwaye zisenza izoyikiso. Kule ngxelo, uSir Gromer Somer Joure uxelele uKing Arthur ukuba kufuneka afumanise ukuba yeyiphi na into enqwenelwa ngabasetyhini, kungenjalo anentloko yakhe. Oku kwenza ukuba uArthur kunye neenqwelomoya benyukele kuwo onke amabhinqa kwaye bababuze, Ke, bafuna ntoni abafazi? Banonyaka wokuyiqonda, kodwa musa ukulawula kude kube lusuku olunye u-Arthur edibana nenenekazi elingenadyudyu ehlathini elithi lingaphendula umbuzo, kodwa ngokutshintshiselana, lifuna ukutshata uSir Gawain.
UGawain uyavuma, kwaye owasetyhini, uDame Ragnelle, uxelela uArthur ukuba abafazi ngenene, ngokwenene, bafuna amandla okwenza izigqibo zabo-leyo, uyazi, ndiziva ngathi umfazi wakhe ebefanele ukuba umxelele loo nto, kodwa nokuba yeyiphi na.
Umtshato uyenzeka, kwaye ekuqaleni, uGawain uyathandabuza, kodwa emva koko uthathe isigqibo sokuba uyokulala nomfazi wakhe amphathe ngenhlonipho ayifaneleyo. Onjani wona umbono! Xa uGawain ejonge umakoti wakhe we-hag, wothuka, uyatshisa ngoku! URagnelle uxelela umyeni wakhe omtsha ukuba ebephantsi komlingo, kwaye ngoku uya kuba nomtsalane kwisiqingatha sosuku. URagnelle ubuza ukuba angathanda na ukuba abe mhle ebusuku xa bekhona ndedwa okanye emini xa abantu bebona?
UGawain emva koko wenza into eyindumasi: Uyambuza ukuba ufuna ntoni. Oko kwaphula isiqalekiso ngokulungileyo, kwaye ubuhle bukaRagnelle bubuyiselwe ngokupheleleyo.
Ngaphandle kobuhle obuqhelekileyo benkunzi yenkomo, ndiyalithanda eli bali kuba uRagnelle wenza nje nantoni na ayifunayo. Usebenza kakubi ngexesha lomthendeleko, kwaye nokuba uGawain wayengakhange afumane impendulo eyiyo, wayesaza kutshata nomtshana kakumkani.
Lilonke, hayi igama elibi lokugqibela.
buyela kwisithethi sangomso
Iiakhawunti ezingasebenziyo zikaFacebook zinokusetyenziselwa ukuhlola iiSithunzi
Ukungabikho kwibhokisi yebhokisi eyimfihlakalo egcwele umdlalo weZihlalo zobukhosi
Izinto esizibonileyo namhlanje: UJeff Goldblum uxhasa iLoki / Grandmaster Fandom
Ibali likaLani Sarem kunye neNcwadana yakhe yoBantu abaFayo yiLungelo eliMhlophe
Kutheni ihlobo lasehlobo ngomhla wokuqala wehlobo?
ewan mcgregor obi wan ndevu
umdlalo weetrone rose house
abalinganiswa ababhinqileyo neenwele ezinde
dan kwipowusta yobomi bokwenyani
Iholo kunye ne-oates inombolo yomnxeba
Iipaki kunye nokuzonwabisa isiqephu seHalloween